Waa maxay heerkulka, sidee loo cabiraa iyo maxay u tahay | Saadaasha Shabakadda
Saadaasha hawada, sayniska, barashada isbeddelka cimilada iyo nidaamka deegaanka iyo, guud ahaan, nolol maalmeedka, waa muhiim in la ogaado heerkulka. Heer-kulku waa hanti jireed oo la qiyaasi karo oo waxtarkeedu aad u weyn yahay fahamka waxyaabo badan oo meerahan ka jira.
Waxaa sidoo kale loo arkaa inay tahay doorsoomaha saadaasha hawada ee muhiimka ah waana sababta aan ugu nuuxnuuxsaneyno dhammaan astaamaha heerkulka. Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato heerkulka?
1 Heerkulka iyo muhiimadiisa
2 Sideen u cabirnaa heerkulka?
3 Heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee saadaasha hawada
4 Cutubyadee ayaan ku cabirnaa heerkulka?
5 Sideen ku ogaan karnaa inaan heerkulka si wanaagsan u cabbirno?
Heerkulka iyo muhiimadiisa
Adduunyada waa la ogyahay in heer kulka uu yahay mid ka mid ah cabirada inbadan ayaa loo isticmaalaa si loo sharaxo loona sharaxo xaalada jawiga. Warka, marka laga hadlayo cimilada, marwalba waxaa jira qayb u heellan heerkulka aan qaadaneyno, maxaa yeelay waa muhiim si loo sharxo xaaladda saadaasha hawada ee aaggeenna. Heerkulku wuu isbeddelaa maalinta oo dhan, wuu ku kala duwan yahay maalmaha daruuraha, ama dabayl, habeenkii, min hal xilli ilaa xilli kale, meelo kala duwan, iwm. Weligeen ma heli doonno heer-kul siman oo deggan saacado badan.
Mararka qaarkood, waxaan ogaannaa in xilliga qaboobaha uu hoos uga dhaco 0 ° C iyo xagaaga meelo badan (iyo sii kordheysa sababtoo ah kuleylka adduunka) way kacaan waxaana la dhigaa meel ka sareysa 40 ° C. Fiisigiska, heerkulka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay tiro la xiriirta sida ugu dhakhsaha badan ee walxaha ka kooban maadada ay tahay inay u dhaqaaqaan. Kacsanaanta badan ee walxahaasi leeyihiin, heerkulka ayaa sareeya. Taasi waa sababta markaan qabow nahay aan u xoqno gacmaheena, maaddaama khilaafka joogtada ah iyo dhaqdhaqaaqa ee walxaha ka kooban maqaarkayagu ay sababaan in heer kulka uu kordho oo aan kululaano
Sideen u cabirnaa heerkulka?
Si loo cabiro heerkulka, waa inaan ku tiirsanaano astaamaha maaddada leh marka lagu beddelo isbeddelada ku jira. Taasi waa, ilaa dhowaan, heerkulka waxaa lagu cabiray heerkulbeegyada meerkuriga, iyada oo ku saleysan fidinta birta meerkurida oo leh heer kul kulul. Sidan oo kale, heer cabir Celsius ah, waxaan ku ogaan karnaa inta darajo ee heer kulka aan nahay ama waa wax uun.
Siyaabo kale oo loo cabbiro heerkulka iyadoo lagu saleynayo astaamaha maaddada waa iyadoo la falanqeeyo iska caabinta korantada ee walxaha qaar, mugga jirka, midabka shayga, iwm.
Heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee saadaasha hawada
Ninka cimiladu badanaa wuxuu ka hadlaa heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu yar. Waana wax caadi ah xagga saadaasha hawada in laga hadlo heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu yar, qiyamka ugu sarreeya iyo kuwa ugu hooseeya ee la diiwaangeliyey muddo, iwm. Cabbiraadahan, waxaa la sameeyay diiwaanada heer kul ee loo adeegsado in lagu cabiro astaamaha cimilada gobol. Taasi waa sababta marka aan ka hadlayno ninka cimilada ah aan ka hadalno saadaasha hawada iyo markaan ka hadlayno heerkulka iyo kuleylka adduunka waxaan ka hadlaynaa cimilada.
Si loo cabbiro heerkulkan ba'an, heerkulbeegga ugu sarreeya iyo kan ugu yar ayaa la isticmaalaa.
Heerkulbeegga ugu sarreeya wuxuu ka kooban yahay heerkulbeeg caadi ah, tuubbada uu ku xaniban yahay gudaha haanta u dhow: marka heerkulku kaco, ballaadhinta meerkuriga ku jirta haanta waxay ku riixaysaa xoog ku filan si ay uga adkaato iska caabbinta diidan ceejinta. Dhinaca kale, marka heerkulku hoos u dhaco iyo tirada qandaraaska meerkuriga, tiirka ayaa jaba, ka taga, sidaas darteed, dhammaadkiisa bilaashka ah ee ugu horumarsan meeshii ay qabsatay intii lagu jiray muddadii u dhexaysay oo dhan.
Heerkulbeegga ugu yar waa aalkolo oo waxay leedahay tusmo ah dhaldhalaalka oo lagu dhex shubey dareeraha gudaha ku jira. Marka heerkulku kaco, khamrigu wuxuu dhex maraa derbiyada tuubbada iyo tusmada, mana dhaqaaqo; Dhinaca kale, marka heerkulku yaraado, jiidayaasha aalkolada waxay yiraahdeen muujinta dhaqdhaqaaqooda gadaal maxaa yeelay waxay la kulantaa iska caabin aad u weyn oo looga tagayo dareeraha. Booska tusmada, sidaas darteed, waxay muujineysaa heerkulka ugu hooseeya ee la gaaray.
Cutubyadee ayaan ku cabirnaa heerkulka?
Ku dhowaad dhammaan tirada jireed waxaa jira halbeegyo cabbir ah oo kala duwan iyadoo kuxiran miisaanka aad rabto inaad cabirto Heerkulku ma aha mid ka reeban sidaa darteedna waxaan leenahay saddex cabir oo heer kulka ah:
Qiyaasta heerka Celsius (° C): Waxay ka kooban tahay qayb joogto ah oo 100 kala-goyn ah, halkaas oo 0 u dhiganta barta barafka ee biyaha iyo 100 illaa barta ay karkarayso. Waxaa lagu muujiyey darajooyinka centigrade waana midka aan inta badan isticmaalno.
Qiyaasta Fahrenheit (ºF): Waxaa badanaa laga isticmaalaa Mareykanka. Heerkulbeegga waxaa qalin jabiya inta udhaxeysa 32ºF (una dhiganta 0ºC) iyo 212ºF (oo u dhiganta 100ºC).
Qiyaasta Kelvin (K): Waa miisaanka ay inta badan adeegsadaan saynisyahannadu. Waa miisaan aan laheyn qiyamka diidmada ee heerkulka, eberkiisuna wuxuu ku yaal gobolka ay jajabyada maaddadu ka kooban tahay aysan u dhaqaaqin. Barta karkaraya ee biyuhu waxay u dhigantaa 373 K halka barta lagu keydshona waa 273 K. Sidaa darteed, isbeddelka 1 darajo ee miisaanka Kelvin wuxuu la mid yahay isbeddelka 1 darajo ee Celsius scale.
Sideen ku ogaan karnaa inaan heerkulka si wanaagsan u cabbirno?
Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee la tixgelinayo marka la cabbirayo heerkulka hawadu waa ogow meesha aan dhigeyno heerkulbeegga si sax ah oo sax ah loo cabbiro qiimaha heerkulka. Waxay kuxirantahay aagga iyo dhererka aan dhigeyno, waxay nagu keeni kartaa dhibaatooyin kala duwan. Tusaale ahaan, haddii aan dhigno derbi agtiisa, wuxuu cabbirayaa heerkulkiisa; hadday dabayshu la kulanto waxay calaamadeyneysaa hal qiime haddii la ilaaliyona mid kale ayey calaamadeyneysaa; Haddii ay ku hoos jirto ficil-celinta tooska ah ee qorraxda, waxay nuugi doontaa shucaaca qorraxda oo waxay kula kululaan doontaa si dhib leh hawo kasta oo soo faragalinaysa, taasoo muujineysa heerkul ka sarreeya kan hawada.
Si looga fogaado dhammaan dhibaatooyinkaas oo ay khubarada saadaasha hawada adduunka oo dhan isbarbar dhigaan cabirradooda midba midka kale ayna yeeshaan xog la isku halleyn karo, Hay'adda Saadaasha Hawada Adduunka waxay dejisay tilmaamo lagu cabbirayo heerkulka si siman dhammaan waddamada adduunka. Heerkulbeegyada Waa inay hawo yeeshaan, laga ilaaliyo roobka iyo shucaaca qoraxda ee tooska ah, iyo inay dherer ahaan dhulka ka hooseeyaan (si tamarta uu u dhuuqo dhulka inta lagu jiro maalinta aysan wax uga beddelin cabbiraadaha).
Sidaad u aragto, heer kulku waa wax aasaasi u ah saadaasha hawada waana ku mahadsan tahay diiwaanadan heer kulka in xogta cimilada meeraha la helo. Markaan u kuurgalno isbeddelada cimilada ee ay dadku soo saaraan, waxaan wax uga qaban karnaa meelaha ugu badan ee ay saameysay.
Haddii aad sidoo kale rabto inaad ogaato sida loo xisaabiyo dareenka kuleylka, ha ka waaban inaad gujiso halkan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Waa maxay heer kulku, sidee loo cabiraa maxaase loogu tala galay?
Salaan, waxaan la yaabanahay haddii markaan daawado Kanaalka Cimilada ama warka heerkulka maanta Madrid ku jiray, ma celcelis ayuu yahay dhammaan saldhigyada mise waa cabbirka ugu sarreeya iyo kan ugu yar midkood. Mahadsanid 😉
Ka jawaab Siralf
Xilli roobaadka ayaa socon doona maalmo kooban
Kulaylka badaha ayaa durba 13% ka sareeya sidii la filayay